भिडियो ब्लग :: NepalPlus
संबिधान नबनी बिदेश आउने नेता फ्रान्समा बहिष्कार (भिडियो ब्लग)
नोभेम्बर २, २०१०
संबिधान बनाउने मूल कसम खाएर संबिधान सभामा पुगेका नेताहरु संबेदनशिल देखिनुको साटो उल्टो नेपालको तलब भत्ता खाएर बिदेश भ्रमणमा रमाउन थालेपछि बिदेशमा बसेका नेपालीहरु क्रुद्द बने । कसो गर्ने त ? अब कुनैपनि सभासद, मन्त्री र प्रमुख...
केपी ओलीलाई फ्रान्समा कालो झण्डा (भिडियो क्लिप)
अक्टोबर २५, २०१०
नेपालमा संबिधान नबनेसम्म कुनैपनि दलका नेता, प्रधानमन्त्री र सभासदलाई फ्रान्समा स्वागत नगर्ने बरु बिरोध गर्ने निर्णय गरेका फ्रान्सका नागरिक समाजक प्रतिनिधीले हिजो एमालेनेता केपी ओलीको बिरोध गरे । पाखुरा र निधारमा कालो कपडा बेरेर उनको बिरोध गर्न...
नेपाली खरर बोल्ने पोर्चुगलकी ‘गुलाबी देवी घिसिङ’
सेप्टेम्बर १७, २०१०
हामी मध्ये धेरैलाई बिदेशी भाषा बोल्न पाए ठुलो मान्छे भएँ जस्तो लाग्छ । जानी नजानीपनि ठुटे अंग्रेजी बोल्नुपर्छ । शुद्द अंग्रेजी नजानेपनि नेपाङ्रेजी (नेपाली-अङ्रेजी मिश्रित) बोलेर हामी जान्ने सुन्न बन्न खोज्छौं । तर बिदेशीहरु भने हाम्रो भाषा...
सेप्टेम्बर १३, २०१०
हिजो पोर्चुगलको राजधानी लिस्बोनमा नेपाली चेलीहरुले धुमधामका साथ तिज मनाए । एन आर एन पोर्चुगलले चेलीबेटीको सम्मानमा निशुल्क रुपमा खाना, दर खाने मेसो र ठुलो हल को ब्यवस्था गरिदिएको थियो । महिला र पुरुष गरेर करिब ५००...
प्रथम विश्व युद्दमा बेल्जियमबाट लडेका नेपाली
अगस्ट २४, २०१०
पहिलो र दोस्रो विश्व युद्दमा विश्वका थुप्रै मूलुकबाट लडे नेपाली । कोही बर्मा त कोही भारतीय सेनाबाट लडे । हजारौं नेपाली थिए बेलायती सेनाबाट लड्ने । त्यतिबेला थुप्रै नेपाली मारिए । सक्ने, भेटिनेको इतिहास लेखियो । तर...
पेरिसमा साँस्क्रितिक कार्यक्रम
जुलाइ १८, २०१०
आज नेपाली एकता समाजले नेपाली कार्यक्रम गर्‍यो पेरिसमा । कार्यक्रममा निकै राम्रो उपस्थिति रह्यो । यस पटक नयाँ नयाँ एक से एक कलाकार देखा परे । असाध्यै राम्रो भयो कार्यक्रम । मैले आज आफैंले भिडियो ब्लग बनाउने...
पेरिसको नेपाली पर्वका भिडियो झलक
मे ३१, २०१०
नेपाली बोल्ने ‘कालो बिरालो’
मार्च २९, २००९
बिरालोले नेपाली भाषा बोल्ने ! कनी कनी हो र ! खरर । त्यस्तो बिरालो जुन नेपाल कहिल्यै गएको, देखे घुमेको छैन । फाट्ट फुट्ट नेपालीहरु भेट्छ उ । शान्ति सेनामा गएका नेपाली । त्यस्ता नेपाली सित के...
लाग्यो त असार
असार त अलि पहिलेनै लागेको हो । तर आज फटाफटा असारे धान रोपेको, हलो जोतेको र बिउ काढेको फोटोहरु देखेपछि साह्रै याद आयो रोपाईको । तपाईहरु मध्ये कतिले काढ्नुभो बिउ ? कतिले लाउनु भो बाउसे ? झरी...
गैंडाको यौन लिला-२ (भिडियो द्रिष्य)
मे ८, २००८
मैंले भित्र गैंडाले यौन लिला मच्चाइरहेको बेलाको भिडियो राखेको छु। यि भिडियो सबै बीबीसी नेचर पिक्चर ग्यालरीका हुन। मजाले संभोग गरिरहेको हेर्नुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गरेपछि त्यहाँ भाले उक्लिरहेको सानो तस्बिर देख्नुहुन्छ। त्यो सानो तस्बिरमा क्लिक गर्नु...